शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
विमल नेपाल आइतबार, असोज २५, २०७७
भृकुटीमण्डपको चउरमा बसेर घोत्लिँदै थिएँ, फोन आयो । घनश्यामले गरेको रहेछ ।
घनश्याम मेरो पुरानो साथी हो । ऊ कलाकारितामा संघर्ष गर्दैछ । उसले कलाकारिता र मैले पत्रकारितामा संघर्ष गरेको समयावधि उतिनै भयो । न ऊ स्थापित हुन सकेको छ, न म । हामी अस्थापितहरुको कुरा मिल्छ ।
धर्मविरुद्ध ११ सय शब्द
‘कता हो पाटी ?’ उसले सधैं सुरुमा सोध्ने प्रश्न र शैली यस्तै हो ।
‘भृकुटीमण्डप । तपाईं ?’
‘म बागबजार, भेट्ने हो त ?’
उसले ‘भेट्ने हो त !’ भनेपछि मैले बुझ्ने, ‘दारु खाने हो त ?’ भन्ने हो । काम नभएर बरालिइरहेको छु । सुलोचनाको सम्झनाले एकोहोरिएको छु । दारु खुवाउने साथी पाए किन नभेट्ने !
‘हुन्छ, भेटौं । तर मसँग पैसा छैन है !’ पहिल्यै टकटकिएँ ।
‘तपाईंसँग कैले भा’को हो र ? मसँग छ । ल बागबजार पिके क्याम्पस अडाडिको गल्लीमा आउनुस् ।’ उसले ख्यास्दै बोलायो । म गएँ ।
पीके क्याम्पस अगाडिको गल्लीभित्रको चिया पसलमा बसिरहेको रहेछ । म पुग्नेबित्तिकै जुरुक्क उठेर गल्लीको पनि गल्लीभित्र छिर्यो । म उसको पछिपछि लागें । एउटा हरियो पर्दावाला भट्टीमा छिर्यो । म पनि छिरें ।
‘नहुने भो यार । जीवनमा जे गर्छु भन्छु, रोकिन्छ । केइमा सफल नहोइने भइयो । मलाई त जीवनदेखि दिग्दारी लागिरहेको छ ।’
गतिलो खालको थिएन भट्टी । पुरानो र्याकमाथि भुटन, चना र राँगोको मासुका ठुल्ठूला चोक्टा राखिएको छ । र्याककै कुनामा ग्याँस चुल्हो । साँघुरो स्पेशमा मिलाएर राखेका चारवटा टेबल र पुराना कुर्सी । एक कुनामा बसेर एउटा मान्छे भटमाससँग स्टिलको गिलासमा ठर्रा पिइरहेको रहेछ । घनश्याम अघिल्लो टेबलको कुनापट्टि गएर बस्यो । म उसको सम्मुख हुनेगरी बसें ।
‘यहाँ दाम्मी तोङ्बा पाइन्छ । तान्ने होइन त ?’
‘दिदी चारवटा तोङ्बा भिजाइदिनुस् न !’ उसले अर्डर गर्यो ।
‘किन चार वटा ?’ मैले सोधें ।
‘एउटाले पुग्दैन । दुई–दुई वटा पिउने । एउटा भिजाउने अर्को तान्ने, अर्को भिजाउने एउटा तान्ने ।’
घनश्याम मुडमा रहेछ । कहाँबाट पैसा ल्यायो, नष्ट गर्ने विचारमा रहेछ ।
उसले सितन अर्डर गर्योः एक–एक प्लेट भुटन र सुकुटी ।
तोङ्बा आयो । तान्न थाल्यौं । मुख अमिलो पार्दै घनश्यामले मसँग प्रतिक्रिया माग्यो, ‘छैन त दामी ?’
‘ठिक छ ।’
सितन पनि आयो । पालैपालो तोङ्बा तानिरह्यौं । ट्रिप दिन थाल्यो । कुरा पग्रियो ।
‘तपाईंको किताब लेख्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?’ उसले सोध्यो ।
यो बलात्कार उद्योग हो !
‘यस्तै हो जीवन । धेरै भावुक नहुनुस् । चल्दै जान्छ । तर, तपाईंको उपन्यास आए त्यहींमाथि फिल्म बनाउँथे ।’
‘पात्रै हराई । कसरी लेख्नु उपन्यास ?’
‘फिक्सन त हो यार । तपाईंलाई फाँडी हान्न आइहाल्छ । कल्पनाकै भए पनि दाम्मी स्टोरी बनाउनुस् न !’ उसले सुझायो ।
‘ओके आइ विल ट्राइ !’
यति भनेर किताबको प्रसङ्गलाई किनारा लगाउँन खोजें । त्यसपछि अनेक विषयमा कुरा भयो । विगत सम्झियौं । जीवन–जगतबारे बहस गर्यौं । स्वर चर्किदै गयो । भावनामा बहकिदैं गयौं । साँझ परिसकेछ । मैले भनें, ‘अब पुग्यो, जाऔं ।’
‘पुगिसक्यो र ? अब यहाँ एक–एक गिलास कोदोको थपौं र तानौं । मज्जा आउँछ ।’
‘बढी हुन्छ यार । फेरि घर जानै नसकिएला !’
‘सकिन्छ’ भन्दै उसले दुई गिलास लोकल ठर्रा अर्डर गर्यो । तोङ्बामै थप्यौं । तान्यौं । झन् धेरै मात बढ्यो । पिउँदै, गफिदैं गर्दा साडे सात भइसकेछ ।
उसले पैसा तिर्यो, ९५० । ५० रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरेर साउनीले ९ सय रुपैयाँ मात्रै लिइन् ।
बाहिर निस्किनेबित्तिकै उसले भन्यो, ‘आज म तपाईंलाई खत्रा ठाउँमा लैजान्छु ।’
घनश्यामले भनेको रमाइलोको संकेत पाएँ । ऊ यौनका मामलामा पहिल्यैदेखि उदार हो । उदार भन्दा पनि क्रेजी हो । उसलाई हल्का मात चढेपछि यौनको उन्माद उम्लेर आउँछ । तर मलाई त्यस्तो व्यवहार राम्रो लाग्दैनथ्यो ।
‘खत्रा भन्नाले कहाँ ?’
‘रमाइलो गर्ने ठाउँ ।’
‘आउनुस् न । त्यैं गएपछि देख्नुहुन्छ ।’
ऊ अघिअघि हिँड्यो । मैले उसलाई पच्छ्याएँ ।
श्रेष्ठ टेलरअघि पुगेपछि घनश्यमले ट्याक्सी रोक्यो । ड्राइभरलाई सोध्यो, ‘गौशाला जाने हो ?’
‘जाने । कति दिनुहुन्छ ?’
‘मिटरमा जऔं न ।’
‘हुन्छ बस्नुस् । अलिअलि हेर्दिनुस् है, उठेको भन्दा ।’
कुनै जवाफ नदिई घनश्याम ट्याक्सीको क्याबिनमा बस्यो । म पछाडिको सिटमा बसें ।
तोङ्बाले घनश्याम धेरै बोल्ने भइसकेको थियो । ड्राइभरलाई सोध्यो, ‘घर कता ?’
‘दोलखा कहाँ ?’
‘कति भयो ट्याक्सी चलाउन थालेको ?’
‘दुई वर्ष भयो हजुर । मलेसियाबाट फर्केर ट्याक्सी चलाउन थालेको ।’
‘ए ए । तपैंको कन्ट्याक्टमा कोही छप्की छन् त ?’
‘छैन हजुर ।’
म, किन मरिनँ !
घनश्यामले भनेको रमाइलोको संकेत पाएँ । ऊ यौनका मामलामा पहिल्यैदेखि उदार हो । उदार भन्दा पनि क्रेजी हो । उसलाई हल्का मात चढेपछि यौनको उन्माद उम्लेर आउँछ । तर मलाई त्यस्तो व्यवहार राम्रो लाग्दैनथ्यो । मैले सोधें, ‘हामी त्यस्तोको खोजीमा हो र ?’
‘होइन, होइन । तपाईं पनि बढी सोच्ने क्या ।’
होइन भने पनि उसको नियत बुझिसकेको थिएँ । कुनै बहाना बनाएर उसँग छुटिन मन लाग्यो । पुरानो बानेश्वर पुगेपछि भनें, ‘म यतैबाट कोठामा जान्छु । हिँडेर गए पनि टाढा छैन ।’
‘त्यस्तो होइन क्या । एकछिन रमाइलो गरेर निस्कने हो । बरु तपाईं पनि आज मेरोमै बसौं, एक्लै छु ।’
मेरो केही लागेन । ट्याक्सी गौशाला चोकबाट तिलगंगातिर मोडायो । अलिकति तल झरेपछि सानो बाटोभित्र छिरायो । मूल बाटोबाट सय मिटर जति भित्र पुगेपछि ट्याक्सी रोकायो । साढे दुई सय रुपैयाँ तिरेर ट्याक्सीबाट झर्यो । म पनि झरें ।
‘कामले बिजी भएँ नि नानी ! भन्दै उसले त्यो केटीलाई अठ्याँयो । दंग परेर हेरिरहें । मेरो छैवैमा बस्नेले पनि मसँगै लेपास्सिदै सोधी, ‘तपाईं पहिलोचोटि हो ?’
ऊ अघिअघि हिँड्यो, मैले उसलाई पछ्याइरहें ।
सानो बाटोभित्रको झनै सानो गल्लीमा छिर्यो । गल्लीको दाइनेपट्टि एउटा खाजाघर जस्तो रहेछ । बाहिर लेखिएको थियो, ‘यूनिक खाजा घर एण्ड रेस्टुरेन्ट ।’ नाम लेखिएको साइडबोर्ड वरिपरि झिमिक–झिमिक बत्ती बलिरहेको थियो । तिहारमा घरको दैलोमा राख्ने जस्तो । भित्र छिर्यौं । ठूलो आवाजमा गीत घन्किरहेको थियो, ‘सिलाकी जवानी ।’ काउन्टरमा कसैसित नबोली ऊ सरासर एक तलामाथि उक्लियो । मैले उसलाई फलो गरें । माथिल्लो तलाको वातावरण बेग्लै रहेछ । काठको फलेकले बारेका साना–साना कोठा जस्ता । पर्दाले बारेको ढोका । छिर्दै गर्दा देखें, बेग्ला बेग्लै कोठामा केही केटासँगै केटीहरु रहेछन् । केटीहरु पनि केटाहरुसँगै रक्सी पिइरहेका, चुरोट तानिरहेका । कसैको हात केटीको कुर्ता भित्र थियो, कसैको सुरुवाल भित्र । कोही चुम्बन गर्दै रहेछन् । ढोकाको पर्दा खुलै भएको पनि कसैलाई मतलब छैन ।
घनश्याम एउटा खाली कोठाभित्र छिर्यो । म पनि छिरें । उसले सोध्यो, ‘तपाईंलाई क्याबिन भन्ने थाहा थियो ?’
‘सुनेको थिएँ । देखेको थिइनँ ।’
‘यही हो ।’
‘थाहा पाएँ ।’
घनश्यामको छेवैमा बसेको थिएँ । उसले ‘तपाईं उतापट्टि बस्नोस्’ भन्यो । म उसको ठिक अगाडि हुने गरी बसें ।
एकछिनपछि दुई जना केटीहरु छिरे । एउटी घनश्यामको छेवैमा बसी, अर्की मेरो छेवैमा । घनश्यामको छेवैमा बस्नेले भनी, ‘तपाईं त धेरैपछि आउनु भो त !’
को कति पागल ?
मैले ‘हो’को भावमा टाउको हल्लाएँ ।
वर्षौ पहिलेदेखि आत्मीय सम्बन्ध भए जस्तरी मसँग नजिकिँदै त्यो केटी बोली, ‘के लिनु हुन्छ ?’
मलाई ओभरटेक गरेर घनश्यामले मेनु गर्दै मगायो, ‘दुईटा टुबोर्ग बीयर, भटमास साँदेको, चिकेन साँदेको र पाँच वटा सूर्य चुरोट ।’
मेरो छेवैमा बसेकी केटी जुरुक्क उठेर हिँडी । अर्कीले घनश्यामलाई भनी, ‘हामीलाई चाहिँ के खुवाउने त ?’
‘खुवाउँला नि बिस्तारै, हतार नगर न ।’ उसले भन्यो ।
‘एक–एक पेग ह्वीस्की पिउँछौं ल ।’ केटीले भनी ।
घनश्यामले ‘हुन्छ’ भन्यो । त्यो केटी पनि उठेर ह्वीस्की लिन हिँडी ।
दुई जना मात्रै भएको मौकामा मैले सोधें, ‘यो के गरेको यार । यस्तो नगरौं ।’
‘ह्या तपाईं पनि । मोज गर्नुस् न मोज ।’
अर्डरअनुसारको सामान लिएर मेरो छेवैमा बसेकी केटी आई । ट्रेलाई टेबलमा राख्दै हाम्रो लागि गिलासमा बीयर भरिदिई । सितनलाई पनि टेबलमा राखी । अर्की पनि आइपुगी, ह्वीस्की लिएर । उनीहरुले नै ग्लास उठाउँदै ‘चियर्स’ भने । चारै जनाले ग्लास ठोक्कायौं । पिउन थाल्यौं ।
अर्थात् सुलोचनाको डायरीका बाँकी पाना खोज्न आएकी थी । जसलाई मैले मोडसम्म पछ्याएको थिएँ ।
सुरुसरुमा अर्ड लाग्यो । मात्दै गएपछि म पनि अर्कै भएछु । घनश्याम केटीसित खुलेर मस्ती गर्दै थियो । मसँग बस्ने केटी पनि घनश्यामले अर्कीलाई गरे जस्तै गर्दियोस् भन्ठान्थी । तर मलाई त्यस्तो गर्न मन लागेन । तर मात चढेकै थियो । बीयरकै नशामा लठ्ठिदै थिएँ ।
तर, त्यो केटीको व्यवहार भने पट्यारलाग्दो लागिरिहेको थियो । कहिले छाती सुम्सुम्याउँथी, कहिले गर्दन । एकचोटी मेरो पाइन्ट भित्र हात घुसार्न खोजी । मैले झट्कालेर उसको हात हुत्याइदिएँ । उसले हल्का मातेको लवजमा भनी, ‘तपाईंको त छैन कि क्या हो ?’
‘उम्...छैन’ मैले भनें ।
त्यतिकैमा अर्की एउटी केटीले पर्दा सारेर भित्र हेरी । उसको मेरो आँखा जुध्यो । एकछिन हेराहेर भो । अनि केही नबोली हिँडी ।
उसको अनुहार चिने जस्तो लाग्यो । चिने जस्तो होइन, कतै देखे जस्तो । तर कहाँ देखें ? पत्तो पाउन सकिनँ । एकछिनपछि क्लिक भयो । अस्ति मन्दिरमा देखेको केटी त्यही हो । जो बिहानै मन्दिरमा केही खोज्न आएकी थी । अर्थात् सुलोचनाको डायरीका बाँकी पाना खोज्न आएकी थी । जसलाई मैले मोडसम्म पछ्याएको थिएँ । र उसलाई नभेटेर निराश भएको थिएँ ।
एक्कासी मेरो शरीरमा बेग्लै रगत सञ्चार भए जस्तो भयो । सुलोचनालाई भेट्ने आधार बने जस्तो लाग्यो । सोचें, ‘म उत्तेजित हुनुहुँदैन । सुविचारित ढंगमा त्यो केटीसित नजिक हुनुपर्छ ।’
मेरो छेवैमा बसेर ह्वीस्की तानिरहेकी केटीलाई सोधें, ‘अहिले भर्खर चियाएर जाने केटीलाई चिन्छौ ?’
‘चिन्छु नि, किन नचिन्नु ? सँगै काम गर्ने मान्छेलाई पनि चिनिंदैन त ?’
‘मलाई त्यो केटी मनपर्यो । उसलाई पठाइदिन सक्छौं ?’
‘छुच्चो मान्छे !’ भन्दै जुरुक्क उठेर गई ।
विवाह परम्परा– मुर्दावाद !
ऊसित केही नगरेर अर्को केटी रोजेकोले ‘छुच्चो’ भनी सायद । भने भनोस् । मलाई त्यसको मतलब थिएन । ‘उ त गई, तर साथीलाई पठाउली कि नपठाउली ?’ सोचिरहें ।
घनश्याम अर्की केटीसित रमाइरहेको थियो । उसलाई हाम्रो केही मतलब थिएन । तर मैले उनीहरुबीचको कुरा सुनिरहेको थिएँ ।घनश्याम त्यो केटीलाई आफ्नो कोठामा लैजान फकाउँदै थियो । केटी आनाकानी गरिरहेकी थिई ।
एकछिनपछि मैले रोजेको केटी आई । मेरो छेवैमा बसी । अघिल्ली केटी भन्दा भलाद्मी जस्ती देखिन्थी ऊ । सोधी, ‘के लिनुहुन्छ ?’
‘एउटा बीयर’ आफैंले अर्डर गरें । ऊ बीयर लिन बारतिर गई ।
धन्न त्यो केटीले पठाइदिइ ! तर अब कसरी कुरा गर्ने ? के कुरा गर्ने ? सोचिरहें ।
बीयर ल्याएर मेरो ग्लासमा हालिदिई । उसले ‘ह्वीस्की खान्छु’ भनिन । अघिल्लीले जस्तो छामछाम–छुमछुम पनि गरिन, बसिरही । एक चुस्की बीयर पिएर चुरोट सल्काउँदै मै बोलें, ‘तपाईंको नाम ?’
‘साँचिकै नाम कि ढाँट्नुभएको ?’ मैले शंका गरें ।
‘आफ्नो नाम पनि किन ढाँट्नु र ?’
‘अनि घर ?’
एकछिन मौनता छायो । अनि आफैंले भनें, ‘अघि एकपल्ट देख्नेबित्तिकै मलाई तपाईं मनपर्यो ।’
‘हो र ! धन्यवाद ।’
‘मलाई तपाईंको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ ?’ मैले आँटले सोधें । क्याबिनमा काम गर्ने केटीलाई नम्बर माग्न पनि मैले बडो साहस जुटाउनु पर्यो ।
‘भन्नुस् त !’ मैले मोबाइल झिकेर नम्बर डायल गर्ने तयारीसहित भनें ।
‘नम्बर त सही नै हो नि !’
शंका लागेर कल गरें । उसको मोबाइल बज्यो । अनि नम्बर सेभ गरें ।
यति भनेर ऊ बाहिरिन खोज्दै भनी, ‘म एकछिन उताको गेस्टसँग हुन्छु ल ।’
‘इट्स ओके ।’
मलाई लागेको रक्सीले नि छाड्यो । बेग्लै आशाको सञ्चार भयो । एक हिसाबले खुसी बढ्यो । धेरै दिनपछि म त्यति खुसी भएको हुँ ।
खुसी हुन ठूला ठूला उपलब्धी चाहिने होइन रहेछ । चाहेका सानासाना कुरामा नै खुसी खोज्ने रहेछ, भेटिँदो रहेछ । खुसी हुने होइन, अनुभूत गर्ने कुरा हो भन्ने त सुनेकै हो । तर, भित्रैदेखि खुसी भएँ । अर्थात् खुसी पाएँ । खुसीका साथ एक ग्लास बीयर ग्याम्बे हानेर हत्केलाले ओठ पुच्छ्दै घनश्यामलाई भने, ‘अब जाने होइन ?’
‘हुन्छ, जाने अब’ भन्दै उसले आफूसित बसेकी केटीलाई अर्डर दियो, ‘जाउ त नानी बील कति भयो लिएर आऊ ।’
केटी उठेर काउन्टरतिर लागी । उसले मलाई सोध्यो, ‘मजा भएन त बुढा ?’
‘भयो । अब मजा पनि पुग्यो ।’
‘मजा लुट्नु पर्छ बुढा, मरिलानु के छ र ?’ उसले गहिरो कुरा गर्यो ।
केटी बील लिएर आई । घनश्यामले नै बील हेर्यो । सात हजार भएछ । तिर्यो । केटीलाई एक हजार टिप्स पनि दियो । अनि हामी बाहिरियौं ।
क्याबिन बाहिर ट्याक्सीको लाइन थियो । उसले एउटा ट्याक्सी समायो । जोरपाटी नयाँबस्ती पुर्याइदिन भन्यो । ट्याक्सीमा मैले भने, ‘आज क्याबिन आएर धेरै राम्रो गरेछौं नि !’
‘बुढालाई पनि रमाईलो भएछ ।’ उसले हल्का हाँस्दै लर्बराएको स्वारमा बोल्यो ।
‘त्यस्तो होइन ।’ मैले भनें ।
‘कस्तो त ?’
‘कुरा अर्कै छ । पछि भन्छु ।’
जोरपाटी नयाँबस्तीस्थित उसको कोठा छेउमा पुगियो । उसले ट्याक्सी भाडा तिर्यो । कोठमा पुगेर दुबै जना ढल्यौं ।
मेरो दिमागमा अनुराधा र सुलोचनाको चित्र मिसिएर घुमिरह्यो ।
#एन्टी–करेन्ट #विमल–नेपाल #क्याविनमा–कमरेड
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०७७ १४:४५
बुधबार, कात्तिक ५, २०७७ १४:३८ यसपालिको आशिष: टाढै बसेस् ! कोर्नाले साँचे धेरै बाँचेस् !
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ १६:१८ बौद्ध दर्शनले आत्माको अस्तित्वलाई स्विकार्दैन
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ १३:२३ डा. केसीले भगवानका किंवदन्तीहरूलाई जितेका छन्
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ १२:५१ हामी त टिका लाउन आको मामाघर !
सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ १३:२३ पिङमा कोरोनाको च्व..च्व..हुई
सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ ११:३३ महाभारतमा उल्लेख बेसारः अमेरिका–क्यानडामा फेसनले फैलायो
प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क
ज्येष्ठ नागरिकग्रामका लागि ३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन
विश्वमा कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या ४ करोड नाघ्यो
समाचार हटाउन नटवरलालको अल्टिमेटम, नहटाए पुलिस केस गर्ने धम्कि
मानव अधिकार आयोग दसैंमा खुला रहने
बौद्ध दर्शनले आत्माको अस्तित्वलाई स्विकार्दैन तुल्सीदास महर्जन
डा. केसीले भगवानका किंवदन्तीहरूलाई जितेका छन् डा. राकेश परियार
१२ करोडको सेटिङ मिलाउन अष्ट्रेलीया बस्ने नटवरलाल नेपालमा
को बलात्कारी ?
झापुटारमा खानेपानीको समस्या
उर्वरकालमा नेपाली मुक्तक
सीमानाकाबाट गरिने आवागमन ३० कात्तिकसम्म निषेध
आज राति मृगशिरा उल्का वर्षा हुने
नेप्सेको उकालो यात्रा जारी, कारोबार रकमसमेत बढ्यो
प्रकाशक सुदीपचन्द्र बख्रेल अध्यक्ष सुरज खनाल
सम्पादक कला अनुरागी